Yintoni inverter yangoku kwaye yenzelwe ntoni | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ukuba ufakela iiphaneli zelanga uyazi ukuba ufuna izixhobo ezininzi ukuze yonke into isebenze kakuhle. Ayibandakanyi nje ukufakela iphaneli yelanga kunye nokulinda ilanga ukuba lenze wonke umsebenzi. Ukuze umbane usebenze kakuhle, uzakufuna inverter yamandla, phakathi kwezinye izinto.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yintoni inverter yangoku, ukuba uyifaka njani kwaye yenzelwe ntoni?
1 Inverter yamandla kwiinkqubo zamandla elanga
2 Yeyiphi inverter yamandla ekufuneka isetyenzisiwe?
3 Ukulungiswa kwe-wave wave kunye ne-sine wave inverter
4 Bangaphi abatyali mali endibafunayo ekhayeni lam?
5 Iiparameter ezisisiseko
Inverter yamandla kwiinkqubo zamandla elanga
Isinxibelelanisi samandla sisetyenziselwa ukuguqula i-12 okanye i-24 yevolthi yevolthi yeebhetri (yangoku ngqo) ukusebenzisa i-voltage yendlu yee-volts ezingama-230 (ezitshintshayo ngoku). Xa iphaneli yelanga ivelisa umbane, ikwenza oko ngoku ngqo. Le yangoku ayisisebenzisi ukuba siyisebenzise kwizixhobo zombane zekhaya ezinje ngeethelevishini, oomatshini bokuhlamba iimpahla, iioveni, njl. Ifuna ukutshintshana okwangoku kunye nevolthi yee-volts ezingama-230.
Ukongeza, yonke inkqubo yokukhanyisa ekhaya ifuna ukutshintshana okwangoku. Inverter yangoku iyayinyamekela yonke le nto xa iphaneli yelanga ifumene amandla elangeni kwaye igcinwe kwibhetri yayo. Inverter yangoku ngu enye yezinto ezenza ikiti yelanga Ngawo sinokuba namandla ahlaziyekayo ekhayeni lethu kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla eefosili.
Kuya kufuneka sikhumbule ukuba ukusetyenziswa kwamandla okuvuseleleka kunegalelo ekunciphiseni iigesi zegreenhouse emoyeni kwaye kusivumela ukuba siqhubele phambili kutshintsho lwamandla ngokusekwe kwi-decarbonisation ngowama-2050.
Ukuba isibane esikufunayo siphantsi kakhulu kwaye sinentambo encinci, ukufakelwa kungenziwa ngaphandle kwesiguquli samandla. Ingadibanisa ngqo ibhetri. Ngale ndlela, isekethe yombane yonke iya kusebenza nee-volts ezili-12, ngelixa i-12 V kuphela iibhalbhu kunye nezixhobo ezinokusetyenziswa.
Yeyiphi inverter yamandla ekufuneka isetyenzisiwe?
Xa sifuna ukufaka amandla elanga ekhaya, kufuneka sizazi zonke izinto ezifunekayo ukufakelwa ukuze zisebenze ngokuchanekileyo. Kukho iintlobo ezininzi ze-inverter zamandla. Ukukhetha inverter yamandla efanelekileyo imeko yethu, kuya kufuneka uthathele ingqalelo amandla alinganisiweyo kunye namandla incopho inverter.
Amandla okubiza ngalawo inverter anakho ukubonelela ngawo ngesiqhelo. Oko kukuthi, i-inverter esebenza ixesha elide kunye nokusebenza kwesiqhelo. Kwelinye icala, amandla aphakamileyo ngawokukunika inverter yangoku ixesha elifutshane. Amandla aphakamileyo afunekayo xa sisebenzisa izixhobo zombane eziphezulu ukuqala okanye ukuba nezixhobo ezininzi ezinamandla ezifakwe ngexesha elinye.
Ngokucacileyo, ukuba sichitha ixesha elininzi kwimfuno zamandla aphezulu, inverter yangoku ayizukukwazi ukusinika amandla esiwadingayo, kwaye iyakuyeka ukusebenza ngokuzenzekelayo (ngendlela efanayo ukuya kuthi ga xa "isikhokelo sixhuma"). La mandla aphakamileyo kubalulekile ukuba sazi kakuhle xa siza kusebenzisa izixhobo zombane ezinje ngeefriji, iifriji, iimixube, oomatshini bokuhlamba, iimpompo zamanzi, njl. Kwaye ezininzi zazo ngaxeshanye. Kuba ezi zixhobo zifuna ukuya kuthi ga kathathu amandla aqhelekileyo esixhobo sombane, inverter yangoku iya kufuneka ukusinika amandla aphezulu aphezulu.
Ukulungiswa kwe-wave wave kunye ne-sine wave inverter
Ezi ziguquli zangoku zisetyenziselwa kuphela ezo zixhobo zombane ezingenayo imoto kwaye zilula. Umzekelo, ukukhanyisa, iTV, isidlali somculo, njl. Kulolu hlobo lwamandla kusetyenziswa i-inverter eguqulweyo yangoku, kuba ivelisa okwangoku ngombane.
Kukho i-sine wave inverters. Ezi zivelisa amaza afanayo afunyanwa ekhaya. Zihlala zibiza kakhulu kuneziguquli eziguqulweyo kodwa zisinika usetyenziso olwandisiweyo. Inokusetyenziselwa izixhobo zombane ezineemoto ezilula nezintsonkothileyo, izixhobo ze-elektroniki kunye nezinye, ezinikezela ngokusebenza ngokuchanekileyo kunye nokusebenza ngokugqwesileyo.
Inyani ebalulekileyo ekufuneka siyithathele ingqalelo kwiinverter zangoku kukuba kufuneka sihlale siwahlonipha amandla imodeli esiyithengileyo enakho ukubonelela ngayo. Ngaphandle koko inverter iya kugqithisa okanye ayisebenzi njengoko kufanelekile.
Bangaphi abatyali mali endibafunayo ekhayeni lam?
Ukwazi inani labaguquli abakhoyo ngoku, kubalulekile ukwazi amandla kwiwatts ekufuneka iiphaneli zakho zelanga zitshintshe ukuhlangabezana neemfuno zombane. Xa sele sikubalile oku, inani leewatts lahlulwe ngawona mandla aphezulu exhaswa yi-inverter nganye, kuxhomekeke kuhlobo.
Umzekelo, ukuba ufakelo lombane unamandla apheleleyo angama-950 ee-watts, kwaye sathenga ii-inverter zangoku ukuya kuthi ga kwi-250 watts, siya kudinga ii-inverters ezi-4 ukuze sikwazi ukugubungela loo mfuno yamandla kwaye sikwazi ukuguqula yonke into yangoku zenziwe kwiipaneli zelanga zisebenzisa amandla enye yokusebenzisa ikhaya.
Isiguquli samandla sineeparameter ezininzi ezisisiseko ekusebenzeni. Zezi zilandelayo:
Amandla ombane. Lo ngumbane ombane ekufuneka usetyenzisiwe kwizitishi zokufaka ze-inverter ukuze ingalayishwa ngaphezulu.
Amandla alinganisiweyo. Sele ikhankanyiwe apha ngasentla. Ngamandla i-inverter ekwaziyo ukubonelela ngokuqhubekayo (akufuneki siyibhidanise namandla aphezulu).
Umthamo omkhulu. Esi sisakhono se-inverter sokuhambisa amandla aphezulu kunesiqhelo ngaphambi kokulayisha ngaphezulu. Oku kunxulumene namandla aphezulu. Oko kukuthi, sisakhono se-inverter ukumelana namandla aphezulu kunesiqhelo ngaphandle kokulayisha nangaphezulu kunye nexesha elifutshane.
Ifomathi yamaza. Umqondiso ovela kwii-terminals ze-inverter yinto ephawuleka kwifom ye-wave kunye nexabiso elifanelekileyo levolthi kunye nokuhamba rhoqo.
Ukusebenza kakuhle. Yinto efanayo nokubiza ukusebenza kwakho. Oku kulinganiswa njengepesenti yamandla kwimveliso ye-inverter kunye negalelo. Olu sebenzi luxhomekeke ngqo kwiimeko zomthwalo we-inverter. Oko kukuthi, kumandla apheleleyo azo zonke izixhobo ezifakiweyo kwaye zisebenzisa amandla, zondliwa ngumtshintshi ngokunxulumene namandla abo abizwayo. Izixhobo ezingakumbi zondliwa kwi-inverter, kokukhona kusebenza ngakumbi.
Ngolu lwazi uya kuba nakho ukwazi ukuba loluphi uhlobo lwe-inverter yangoku ekufuneka uyigqibile ikhithi yelanga. Wamkelekile kwihlabathi lamandla ahlaziyekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » Yintoni inverter yangoku kwaye yenzelwe ntoni
inkcazo esisiseko eqondakalayo yabangezizo iingcali njengam,… .. enkosi kakhulu